Heshiis dhexmaray Jaamacadda Bariga Afrika (EAU) iyo Jaamacadda Caalamiga ah ee Afrika (IUA) – East Africa University
Heshiis dhexmaray Jaamacadda Bariga Afrika (EAU) iyo Jaamacadda Caalamiga ah ee Afrika (IUA)
Jaamacada bariga Africa iyo Jaamacada caalamiga ah ee Afrika (International University of Africa) ayaa heshiis caalami ah ku kala saxiixday xarunta faraca Jaamacada bariga africa ee magaalada garoowe ee caasimada Puntland.
Hormuudka kulliyada shareecada Islaamka Jaamacadda Bariga afrika Dr Jaamac Maxamed Xasan ayaa tilmaamay in uu heshiiskan adkeynayo xirirka labada jaamacadood uuna ka qeyb qaadanayo kobcinta fursadaha iskaashi ee ka dhaxaysa labada jaamacadood, isla markaana ardayda ka baxday jaamacadda iyo bulshada guud ahaan ay ka faaidaysan karaan.
Dr Baacasiis Cali Bin Cali oo ah Hormuudka kulliyadda shareecada iyo qaanuunka ee Jaamacadda caalamiga ah ee afrika ayaa ku tilmaamay heerka waxbarasho ee ka jira Puntland mid soo jiidanaya Jaamacadaha kale ee Caalamka, Isagoona sheegay inay Ahmiyad istiraatiijiyeed u leedahay Jaamacada Bariga Afrika.
Gudoomiyaha guud ee Jaamacada bariga Afrika Dr Aadan Sheekhdoon Cali ayaa ku tilmaamay heshiiskaan inuu yahay fursad dahabi ah oo usoo hooyatay bahda Waxbarashada, gaar ahaan ardayda dhamaysay Jaamacadda Bariga Afrika, wuxuuna sheegay inay muhiim tahay in si wanaagsan looga faa’iideysto.
Agaasimaha guud ee Wasaaradda Waxbarshada iyo Tacliinta sare ee Puntland Maxamed Cabdiqaadir Cismaan ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan heshiiska wasaarad ahaan, ayna tahay fursad ay ka faa’iideysan doonaan Ardayda Soomaaliyeed isagoo Jaamacada Bariga Afrika ku amaanay dadaalka ay waddo, iyo guulaha ay ka gaartay xiriirka caalamiga ah.
Jaamacada Bariga Afrika ayaa mudadii ugu danbaysay waxay heshiisyo kala duwan la gashay jaamacado caalami ah gaar ahaan Jaamacado ku yaala Dalalka Malaysia,Sudan iyo Sweden.
Kulliyadaha lagu heshiiyey:
1- Kulliyadda Shareecada:
Usuul (أصول الفقه)
Siyaasah Sharciyah (السياسة الشرعية)
2- Kulliyadda Qaanuunka:
Qaanuunka Guud (القانون العام)
Qaanuunka Khaaska ah (القانون الخاص)